आज भारी बर्षा र बाढीपहिरोको सम्भावना, कहाँ के हुन्छ ? – Jaljala Online
आज भारी बर्षा र बाढीपहिरोको सम्भावना, कहाँ के हुन्छ ?
Posted on July 19, 2019 July 19, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
साउन ३, काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज (शुक्रबार) देशका मध्य र पूर्वी पहाडमा बाढीपहिरोको सम्भावना उल्लेख गर्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार बिहान २४ घण्टे चेतावनी जारी गर्दै महाशाखाले उक्त क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढीपहिरोको विपद् आउन सक्ने उल्लेख गरेकाे छ।
महाशाखाले भनेकाे छ- देशका मध्य र पूर्वी क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ, जसका कारणले ती क्षेत्रका पहाडी भू-भागमा पहिरो जानसक्ने र पहाड तथा चुरेबाट बहने खोलाहरुमा जल सहत बढ्न सक्ने भएकाले सामान्य सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिन्छ।
महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार हिजो/अस्तीको तुलनामा आज मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा मनसुनी गतिविधि केही सक्रिय हुने भएको हो। ‘उक्त क्षेत्रका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले २४ घण्टे चेतावनी प्रकाशन गरेका हौं।’
उनका अनुसार पहिलजस्तो लगातार झरी नपरे पनि बदली र वर्षा केही बढ्ने सम्भावना छ। महाशाखाकी मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुुसार अहिले पूर्वी र मध्य क्षेत्रका थोरै र पश्चिम क्षेत्रका एक/दुई स्थान मा वर्षा भइरहेकाे छ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि बिहानै वर्षा भएकाे छ। तर काठमाडौंमा कुनै ठाउँमा पानी परेको छ भने नजिकै अर्काे स्थानमा परेको छैन। महाशाखाका अनुसार अहिले देशका पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्णसम्म तथा पश्चिम क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली छ।
महाशाखाका अनुसरा मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिणतिर अर्थात् भारतमा अवस्थित छ जसका कारण अहिले देशभर मनसुनी गतिविधि कम सक्रिय छ।
तर एक/दुई दिनभित्र त्यो रेखा पुनः नेपाल भित्रिने सम्भावना रहेको मौसविद् कँडेलको भनाइ छ। ‘अहिले न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिण (भारत) मा छ,’ मौसमविद् कँडेलले भनिन्, ‘अब १/२ दिनमा पुनः सिफ्ट (नेपाल भित्रिने) सम्भावना देखिन्छ।’ उक्त रेखा भित्रिएपछि पुनः ठूलो वर्षा हुने मौसमविद्को अनुमान छ।
यस्तो छ तीन दिनको मौसम पुर्वअनुमान
एक साताअघि परेको अविरल वर्षाले पर्सामा ठूलो जनधनको क्षति भयो ।
पहिले डुबानममा नपरेको वीरगञ्ज एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नगर विकास कोष र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लगानीमा निर्माण भएको मझौला सहर तथा सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका कारण दुई वर्षयता डुबानको समस्या भोग्न बाध्य भएको छ ।
डुबानबाट निकास पाउन निर्माण गरिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि नै डुबानमा वीरगञ्ज सहर पर्न थालेपछि मुख्य बजार क्षेत्रका व्यवसायी नै आक्रोसित भएका छन् ।
७२ घण्टा अविरल पानी परेपछि वीरगञ्जको मुख्य बजारक्षेत्र आदर्शनगर डुबानमा परेर त्यहाँका सबै पसल सटरमा पानी पसेर करोडौँको नोक्सानी भएको व्यापारीको गुनासो छ ।
बाढीबाट पर्सा र बारामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्नबाली नष्ट भएको छ ।
सधैँजस्तै यसवर्ष पनि असार निख्रिनै लाग्दा सुरु भएको मनसुन र त्यसपछि आएको बाढी–पहिरोका कारण ९० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो ।
२९ जनाभन्दा बढी वेपत्ता र ४१ जनाभन्दा बढी घाइते भए । सयौँलाई घरबारबिहीन बनायो यो विपत्तले । यही विपत्तिको चपेटामा परे काभ्रे जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वडा.नं ११ स्थित पातलेखेत निवासी सविन धिताल पनि ।
दाङको ज्यानमारा पोखरी, डुबेर १५७ जनाको मृत्यु
Posted on August 4, 2019 Author Jaljala Online
साउन १९, दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका–१८ मसिनास्थित कृत्रिम पोखरीमा डुबेर तीन युवतीको ज्यान गयो। यो खबर गोपाल शर्माले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । साउन ५ गते बेलुका पोखरीमा हातगोडा धुन गएका १६ वर्षीया अमृता विक, १९ वर्षीया झरना विक र वसन्ता विकको पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको लियो। उनीहरू खेतमा रोपाइँ सकेर घर फर्कने बेला हातगोडा […]
भोली कार्तिक ५ गते राशिअनुसारको तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? आजै थाहा पाउनुहोस्
भोली मिति २०७६ साल कार्तिक महिनाकाे ४ गते म‌गलबार । अ‌ग्रेजीपात्राे अनुसार २०१९ अक्टाेम्बर २२ तारिख रहेको छ । मेष -परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्ता अलि दु:ख पाइनेछ। हतारको निर्णयले काम बिग्रन सक्छ। महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन्। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ। मान्यजनको मन जित्ने […]
किन कोरिया जान पाउँदैनन् भाषा पास परीक्षार्थी, यसपाली पास भएका कतिजना जना पाउछन ?